अभिनेत्री पल्पसाको मृत्युको खबर कसरि आयो बाहिर ? – Kavrepati
Home / समाचार / अभिनेत्री पल्पसाको मृत्युको खबर कसरि आयो बाहिर ?
अभिनेत्री पल्पसाको मृत्युको खबर कसरि आयो बाहिर ?
admin September 3, 2021	समाचार Leaveacomment 227 Views
काठमाडौं । यतीबेला घरमा आराम गरिरहेकी हास्यव्यंग्य अभिनेत्री पल्पसा डंगोलको परिवारलाई सोरबार र मंगलबार धेरैले फोन गरेर पल्पसाको अवस्थाबारे जानकारी लिए । टिकटक चलाउनै कुनै व्यक्तिले यी पल्पसाको तस्बिरमा ‘श्रद्धाञ्जली’ लेखेर सोमबार टिकटक बनाएपछि धेरैले आत्तिँदै उनका परिवारलाई फोन गरेका हुन् ।
धेरैले उनको टिकटकमा लेखिएको श्रद्धाञ्जलीबारे प्रश्न राख्दा उनका आफ्नाले हैन भनेर प्रस्ट पार्नुपरेको थियो । कसैलाई पनि एक्कासी श्रद्धाञ्जली लेख्दा त्यो व्यक्तिको परिवारदेखि शुभचिन्तकसम्म आत्तिनु स्वाभाविक नै हो । यही समस्या पल्पसा र उनको परिवारले अहिले भोग्नुपरेको छ ।
यो प्रसंगमा हास्यव्यंग्य अभिनेत्री पल्पसाले राजधानीसँग भनिन्, ‘टिकटकको भ्युज बढाउने नाममा जिउँदो मान्छेलाई यसरी हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेखेर भिडियो लोड गर्दा कति पीडा हुन्छ होला । यस्तै पीडा अहिले म र मेरो परिवारले भोग्नुपरेको छ,’ उनले अगाडि थपिन्, ‘म स्वास्थ्य उपचार गराइरहेको बेला टिकटिक चलाउनेहरूले मेरो तस्बिरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेर पटकपटक भिडियो लोड गर्दै मलाई जिउँदै मारिरहेका छन् । गत महिना पनि मलाई यस्तो पीडा दिइएको थियो र हिजो मंगलबार पनि यस्तै पीडादायी कार्य टिकटक चलाउनेहरूले गरेका छन् ।’
हास्य अभिनेत्री पल्पसा डंगोलको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएको छ । गत महिना दुईवटै मिर्गाैलाले काम गर्न छाडेपछि काठमाडौंको त्रिविवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएकी उनी केही समय उपचारपछि अहिले घरमै आराम गरिरहेकी छन् । उनले अहिले ग्वार्कोस्थित किस्ट अस्पतालमा डाइलसिस गरिरहेकी छन् ।
आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे उनले राजधानीसँग भनिन्, ‘पहिलाको भन्दा केही सुधार भएको छ । अहिले आफैं नुहाउने, खाना बनाएर खाने तथा सामान्य हिँडडुल गर्न सक्ने भएकी छु ।’
यी अभिनेत्रीले अबको केही समयमा मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्ने पनि बताएकी छन् । एक जना आफन्त मिर्गौला दिन तयार भएको र मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि अहिले आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरिरहेको उनले बताइन् ।
सबै परीक्षण सकिएको र अब आफूहरूको मिर्गाैला ‘म्याचिङ’को परीक्षण यो साता हुने पनि उनले बताइन् । यदि म्याचिङ भएको खण्डमा आफू मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारीमा जुट्ने पनि उनले जनाएकी छन् ।
Previous नेपाल विश्वकै सुन्दर देशको पहिलो स्थानमा, भारत सूचीमै परेन, हेर्नुहोस विश्वले छानेका ७ तस्विर
Next तीजकै कारण यी दूई दिदीबहिनीको मृत्यु, मृत्यु पुर्व श्रीमानलाइ फोन गरेर भनेका थिए, ‘बाबुको ड्याडी, हामीलाई खोलाले बगायो, हामीलाई बचाउन आउनुहोस्।’